मनोरञ्जन | langtangnews.com | Page 2
Featured, मनोरञ्जन August 29, 2017
बिहे गरेको ८ वर्षपछि बल्ल थाहा भयो श्रीमतीको लाजमर्दो यस्तो वास्तविकता
एजेन्सी। भनिन्छ कुनै पनि सम्बन्धमा विश्वास सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । तर, कहिलेकाहीँ यही विश्वास टुट्यो भने जिन्दगी नै बर्बाद हुन्छ । यस्तै भयो रुसको बश्कोर्तोस्तानका इगोर एलेक्सिभलाई । उनी ८ वर्षअघि बिहे गरेकी श्रीमतीसँगै…
Featured, ताजा खबर, मनोरञ्जन July 1, 2017
गोसाइकुण्ड–मेलम्ची यात्रा र मेडिकल स्टुडेन्ट सिन्ड्रम–१
जाँदा पनि ऊ कालो आउँदा पनि ऊ कालो के हो? विशद दाहाल, एमबिबिएस चौथो वर्ष काठमाडौँको धुवाँ–धुलो र कोलाहललाई छल्दै हाम्रो जिप ऐतिहासिक शहर बेत्रावतीमा खाना खान रोकिएको थियो। बिहानैबाट भोकले चाउरिएको पेटमा जब दुई…
Featured, ताजा खबर, मनोरञ्जन June 21, 2017
सेक्सपछि ‘भर्जिन’ बन्न यस्तो पनि गर्छन् युवतीहरु (एउटा खोजमुलक रिपोर्ट)
यास्मिन (नाम परिवर्तन) निकै भाबुक देखिन्छन् । उनी आफ्नो नङ दाँतले लगातार टोकिरहेकी छिन् अनि लगातार मोबाइन चलाइरहेकी छिन् । ‘म यसलाई धोकाका रूपमा मान्छु र यसकारण निकै दुःखी छु ।’- उनले भनिन । हामी…
Featured, मनोरञ्जन May 15, 2017
पहिलो यौन सम्बन्धका बारेमा के सोच्छन महिला ?
यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउँने तथ्य उक्त अध्ययनबाट देखिएको हो । युवतीहरुले यौनको बारेमा कस्ता कस्ता कुरा सोच्छन् भन्ने विषयको अध्ययनको निष्कर्ष यस्तो छ : १. अपरिचितसँग सेक्स अधिकांश महिलालाई अपरिचित पुरुषले छुँदा…
Featured, ताजा खबर, मनोरञ्जन January 14, 2017
बेत्रावतीमा गोरु जुधाईको रौनक
वेत्रावती – नेपालमा माघे संक्रान्तिको दिन नुवाकोटमा गोरु जुधाइन्छ। साँढे जुधाउने खेल त स्पेनको राष्ट्रिय खेल नै हो। तर रसुवा, नुवोकाट र धादिङमा माघेसंक्रान्तीको दिन गोरु जुधाउने परम्परा छ । जनावर जुधाएर आनन्द लिने मानिसको…
ताजा खबर, मनोरञ्जन January 12, 2017
सेक्स गर्न यो पन्छीले पार गर्यो १३ हजार किलोमिटर यात्रा
एजेन्सी । तपाइले सुन्नु भएको होला कि, पन्छी, नदी र हावाको झोकलाई कुनै पनि सीमाले रोक्न सक्दैन । यहि कुराको प्रमाणित एक चरा गरेको छ । एक सानो परेवा भन्दा पनि सानो सन्डपाइपर नामको पन्छीले…
मनोरञ्जन January 12, 2017
ओंठमा कोठी हुने मानिस किन हुन्छन् शारिरीक सम्बन्धका प्यासी
एजेन्सी । मानिसका शरीरमा देखिने कोठीका विषयमा विभिन्न मान्यता र विश्वासहरु रहि आएको पाइन्छ । कतिपयले शरीरका कोठीलाइ भाग्यसँग पनि जोड्ने गरेका पाइन्छ । यद्यपी मानिसको शरीरमा देखिने कोठीले प्रभाव पार्ने बताइन्छ । हाम्रो शरीरमा…
मनोरञ्जन January 1, 2017
यस्तो पनि चलनः पति रोज्न युवाहरुसंग यौन सम्बन्ध
एजेन्सी । दुनियामा विहे गर्ने अनेकौं परम्परा छन् । तर, केही परम्पराले दुनियालाई चकित बनाउँछन् । यस्तै एक परम्पराका अनुसार महिलाहरु कैयौं पुरुषसंग सम्बध बनाएर आफ्तो पति रोज्छन् । कम्बोडियाको क्रिउन जनजातिमा विहेको लागि यस्तै…
Featured, मनोरञ्जन September 1, 2016
अभिनय क्षेत्रमा अगाडी बढ्दै रिया घले
नेपालको बिकट र दुर्गम रसुवा जिल्लामा जन्मिएर पनि कला र अभिनय क्षेत्रमा लागेर आफ्नो परिचय बनाएकी छिन मोडल रिया घलेले । २०५१ साल बैशाख ३ गते पिता नरबहादुर घले र माता कुमारी घलेको कोखबाट रसुवा…
ताजा खबर, मनोरञ्जन March 20, 2016
टेलिभिजनमा हेर्दाहेर्दै यसरी गायब भइन् महिला
सोसल मिडियामा यो भिडियो अहिले निकै भाइरल बनेको छ । लाखौँ मानिसले भिडियो हेरिसकेका छन् । एक टेलिभिजन लाइभ शो का दौरान दृश्यमा देखिइरहेकी महिलालाई एकाएक गायब भएको देख्न पाइन्छ । नर्वेको टेलिभिजन च्यानलमा स्पोर्टस्…